U Benny McCarthy uphefumule okokuqala ngesokuqeqesha i Bafana – Sivubela intuthuko Newspaper
U Bennie McCarthy osohlwini lwabaqeqeshi abangase baqeqeshe iqembu lesizwe lebhola lezinyawo eNingizimu Afrika i Bafana Bafana.
U Benny McCharthy uthe ugxile ngo “150 million percent” emsebenzini wakhe njenga nomqeqeshi oyinhloko we Cape Town City, kodwa uthe angazinika ithuba lokuxoxa ne South African Football Association (SAFA) ngomsebenzi wokuqeqesha i Bafana Bafana.
U McCarthy usohlwini lwabaqeqeshi abangaba sethubeni lokuvala isikhala sika Stuart Baxter, owabeka phansi izintamba ezinsukwini ezimbalwa ebuye emidlalweni ye Africa Cup of Nations e Egypt aphuma kuyo emdlalweni wama quarterfinals.
U Gavin Hunt, u Pitso Mosimane kanye no Steve Komphela bangabanye abavela embangweni wesikhundla somqeqeshi we Bafana, bonke laba baqeqeshi banamava ukwedlula u McCarthy.
Ukuqala umsebenzi wakhe ngegiya eliphezulu, uMcCarthy uzakhele igama wazibeka ethubeni lokuthatha imisebenzi evelele, uMcCharthy usebenze kanzima wafika emidlalweni yamanqamu yezindebe ezimbili waphinda wakhala wemuka nesicoco se MTN8.
Ngemuva kokunqoba umdlalo ngo 1-0 bebhekene ne Stellenbosch FC e Athlone Stadium ngomgqibelo, u McCarthy uthe ubengakaze axhumane neziphathimandla ze SAFA ngomsebenzi wokuqeqesha i Bafana Bafana, uthe okwamanje usazibophezele ekwenzeni umsebenzi wakhe wokuqeqesha i Cape Town City ngokuzikhandla.
“Akhona amahlebezi angeyamanisa nomsebenzi wokuqeqesha i Bafana, kodwa ke ngiyazi ngibile kule ndima njengo mdlali. Kwakukhona amahlebezi ayengeyamanisa ne Manchester United ne Chelsea, ukuba ngake ngagxilisa umqondo wami kuwona ngangingagcina ngilahlekelwe umsebenzi wami,” kusho u McCarthy.
UMcCarthy uthe lokhu kusho lukhulu kuyena njengomqeqeshi osathanjelwe ukhakhayi.
“Njengomqeqeshi kuyangithokozisa ukweyamaniswa nomsebenzi ongaka, lokhu kusho ukuthi sisebenza kanzima nethimba lami kanye nabadlali beqembu engiliqeqeshayo. Uma isikhathi sifika izikhulu zami ziyongazisa ukuthi kwenzakalani, kodwa okwamanje ngisazinikele emsebenzini engiwenzayo ne Cape Town City,” kusho u McCarthy.
UMcCarthy uphethe irekhodi lokuba namagoli amaningi kwi Bafana Bafana njengoba avalela amagoli angama 31 evela emidlalweni engu 80, okubalwa imidlalo emibili ye World Cup ne Runners-up medal ngomdlalo wamanqamu e Nations Cup ngo 1998. Waphinde wanqoba isicoco se Uefa Champions League ne FC Porto eyayiholwa u Jose Mourinho.